Guyyaan Gootota Oromoo Kutaa New Zealand Konyaa Wellington Keessatti Sirna Miidhagaafi Hoo’aan Kabajame.
Date: April 19, 2010Author: Oromedia 0 Comments
Oromedia/ New Zealanad Ebla 19/ 2010) Tarkaanfiilee WBOn humna qubattuu Wayyaanee irratti fudhachaa jiruuf kabjaafi dinqisiifannaa akka qaban miseensoti ABO Kutaa New Zealand beeksisan. Murtii dabaa Wayyaaneen sabboontota Oromoo irratti kennaa jirtu illee balaaleffatanii jiru.
Miseensoti ABO kutaa New Zealand Ayyaana Guyyaa Gootota Oromoo, Ebla 15, kabajatan irratti akka beeksisaniitti, tarkaanfiilee WBOn fudhachaa jiru dinqisiifachuun duubattis waan danda’an hundaan WBO bira akka dhaabbatan waada isaanii haaromsanii jiru.
Guyyaa Yadannoo Gootota Oromoo kanarratti dungoon gootota Oromoo ofii wareegamanii saba isaaniif ibsaa ta’an yaadatu kan qabsiisame yoo ta’u, sana boda akkuma aadaa Oromootti sinri sun eebba maanguddoon eegalame.
Dura taa’aan Kutaa New Zealand wayituma kana dubbii dubbataniin ummatni Oromoo ittisa biyya isaa Oromiyaatiif diddaa gabrummaa fi qabsoo bilisummaa finiinsaa jiru keessatti wareegama qaqqaali kaffalaa akka jiru yaadachiisuun, Gootota Oromoo diddaa gabrummaa fi qabsoo bilisummaa irratti wareegaman seenaan bara baraan kan yaadatu ta’uu eeranii jiru.
Guyyaa Gootota Oromoo kana laalchisee MGS fi itti gaafatamaan BBA-ABO J/Gaashuu Lammeessaa ibsa bal’aa kennan keessatti, ummatni Oromoo fi qabsaawoti ABO Gootota Oromoo kanneen bilisummaa saba isaaniif jecha osoo qabsoo godhanii dirree falmaa, mana hidhaa fi haala adda addaa keessatti lubbuun isaanii darbe wagga waggaan Ebla 15 yaadatee akka oolu hubachiisanii jiru.
“Guyyaan kun guyyaa jaallawwan keenya kufan itti yaadannuu fi wareegama gootota keenyaatti firii godhuuf waada keenya itti haaromsinuu dha,” kan jedhan J/Gaashuun akeekaafi kaayyoo Goototi keenya kufaniif galmaan gahuuf ammas akkuma kanaan duraatti qabsoon bilisummaa sadarkaa olaanaatti akka finnisu mirkaneessanii jiru.
Miseensa gameessa qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta’an J/Dhugoomsaa Dhugaasaas karaa sarara paltalkii “Oromiyaa Wiirtuu Gadaa Bilisummaa Oromoo” dhaamsa ummata Oromoo hundaaf godhan keessatti hundee qabsoo bilisummaa Oromoofi kaayyoo bilisummaa mirkaneessuuf ummati Oromoo daran ijaaramee tokkummaa isaa jabeessee akka hojjatuuf ergaa ciimaa dabarsaani jiru.
Miseensonni ABO Kutaa New Zealand Konyaa Wellington keessa jiraatan kun wayituma kana ibsa ejjannoo baafataniin seenaa qabsaawota Oromoo keessatti kan duraa kan ta’e, gocha gantummaa qawwee wareegama Gootota Oromootiin horatame kanneen fudhatanii diinatti galanii fi maqaa investimentiin biyyatti deddeebi’uun, biyyatti nagaa fi dimokiraasiin akka waan jiruutti kijiban sagalee tokkoon balaaleffatanii jiru.
Kana malees, yeroo ammaa kana WBOn tarkaanfii diina irratti fudhachaa jiruuf diinqisiifannaa akka qaban kan ibsan miseensoti ABO kunneen “waan dandeenyu hundaan WBO bira dhaabbachuuf waada keenya haaromsinee jirra,” jedhanii jiru.
Sabboontota Oromoo mootummaan abbaa irree Wayyaanee mana hidhaa keessatti dararaa ture, dhiyeenya kana murtii adabbii du’aa, murtii umurii guutuu fi bara dheeraa irratti karaa dhaddecha fakkeessaatiin dabarses akka balaaleffatan kan ibsan miseensoti ABO kutaa New Zealand konya Wallingiton, hawaasti addunyaas murtii loogii fi sanummaan guutame kana jijjiirsisuu irratti akka sagalee isaa dhageessisu waamicha dabarsanii jiru.
Jeequmsa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ABOn hogganamu keessatti dhalatee tureef furmaata wayyeessaa argamsiisuuf yaalii araaraa manguddoonni Oromoo godhaa jiran qalbii guutuun hordofaa akka jiran kan ibsan miseensoti ABO kunneen, “tarkaanfii hogganni keenya fudhatu hunda nideeggara; fiixa ba’iinsa isaafis waan dandeenyu hunda gumaachuuf qophii dha,” jedhaniiru.
Ayyaana Gootota Oromoo kana irratti wallisaa Oromoo jalatamaa fi kabajamaa kan ta’e J/Kadiir Sa’iid karaa paltalkii dhiyaatee ummata mara warraqsaa fi dammaqsaa akka oole gabaasaan Oromedia beeksisee jira.
Previous Previous post: Australian Oromo community leaders at Canberra
Next Next post: Yaadannoon Gootota Oromoo Hirmaannaa Sabboontotaa Dabaluun Kabajame!